Fihetseham-po momba ny varotra Forex; nohazavaina sy noresahana - Fizarana 2 | FXCC
fanabeazana - Lahatsoratra & torolalana - forex basics articles - Fihetseham-po momba ny varotra Forex; Nifampiresaka sy niparitaka - Fizarana 2
Fihetseham-po momba ny varotra Forex; Nifampiresaka sy niparitaka - Fizarana 2
Vitsy dia vitsy amin'ireo mpivarotra antsinjarany no hanao azy io
Maro ny fampahalalam-baovao, antontam-baovao ary hevitra momba io lohahevitra io, saingy tsy misy na tsy misy farany izany. Mamaky isika fa ny 95% ny mpivarotra dia tsy mahomby, fa 1% fotsiny ny mpandraharaha ara-toekarena no manao fivarotana velona ary ny ankamaroan'ny mpivarotra dia mamoy aorian'ny telo volana sy ny fandaniana 10k. Ireo tarehimarika ireo dia mety marina, saingy mila fanadihadiana hafa izy ireo alohan'ny hanaiky azy ireo ho toy ny marina.
Ohatra; firy avy amin'ny 95% izay heverina ho tsy mahomby dia mpivarotra matotra izay nanokan-tena ho an'ny fahaiza-manao amin'ny varotra?
Firy no mahita ny tena ao anatin'izany toerana mahafinaritra, Manana fotoana ampy, manana ny toe-tsaina mety, manana ny fidiram-bola azo antoka sy ny tahiry, hijerena ny risika sy ny valisoa ary matotra ampy hiatrehana ny antsipiriany rehetra? Raha toa ianao ka manolo-tena, matotra ary manana vola be ary mitady ny torohevitra tsara indrindra sns dia hivoatra ny fahombiazanao amin'ny fahombiazana.
Ny paikady tsotra dia mahasoa kokoa noho ny zava-manahirana
Raha miasa izy dia miasa izany. Ny anton'ireo mpivarotra efa za-draharaha dia hisafidy ny fahatsorana noho ny fahavitrihana satria izy ireo dia efa nanandrana ny fampifanarahana ny endriky ny endri-pahaizana teknika sy ny paikady, avy eo dia hanomboka hivezivezy ny sainany / ny fe-potoana sy ny fomba fiasa, hifantoka amin'ny inona no miasa ho azy ireo.
Na izany aza dia mbola misy mpandraharaha manana traikefa mahomby any, izay hampiasa maromaro samihafa: rindrin-tanimanga, fractals, Fibonacci, teboka pivot ary averina mivezivezy mba handraisany fanapahan-kevitra. Ankehitriny izay mamaky toy ny tetikady sarotra, saingy raha ny marina, tsy izy ary amin'ny fanaraha-maso voalohany ny diany dia hijery vanila. Halain'ny osmosis izy ireo, mandritra ny taonan'ny fampiharana, fahaizana miafina maro, izay tsy voatery ho hita ao amin'ny diany.
Ny rafitra varotra dia afaka miasa amin'ny fotoana rehetra
Azo antoka fa tsy afaka. Ny rafitra varotra / metatra izay miasa ho an'ny fanodinana, tsy azo antoka ny miasa amin'ny andro / varotra varotra, na ny fivarotana toerana. Ireo fahaiza-manao sy fomba amam-panaovan'ireny fomba fiasa samihafa ireny dia samy hafa tanteraka. Raha manandrana manonofy avy amin'ny hetsika fohy ianao, dia mety tsy afaka mampiasa tetikady maromaro ianao mba handraisana fanapahan-kevitra. Azonao atao kokoa ny mahita ny lamin'asa mivezivezy eo amin'ny pivotan'ny teboka isan'andro ary manapa-kevitra avy hatrany.
Ny varotra dia tena ara-tsaina
Raha manana ny toe-tsaina mety indrindra rehefa ilaina ny fivarotana, ny fifanakalozan-kevitra / ny adiady dia nihanihany nandritra ny taona maro mikasika ny an'ny 3Ms; ny saina, ny fitantanana ny vola ary ny metatra ambony indrindra.
Maro ny mpivarotra no milaza fa ny vola fitantanana / risika no lafiny manan-danja indrindra amin'ny varotrao, ny hafa dia manoro hevitra fa tsy misy ny fomba fiasa ara-psikolojika tsy misy ilàna azy. Ny fivarotana dia tsy dia ara-tsaina loatra, ny psikology dia lafiny iray manan-danja, saingy mety ho tototra tanteraka raha toa ka misy misiônera amin'ny fampiasana automation feno ho an'ny varotra rehetra.
FAMPIANARANA FAHATSIAROVANA: Ny fitaovana elektronika dia fitaovana henjana ary mety hiteraka taham-pitaterana haingana be noho ny fampiasana azy. Ny 79% amin'ny kaontin'ny fampindramam-bola isan-karazany dia very fahaverezana rehefa mivarotra CFD miaraka amin'ity mpamatsy ity. Tokony handinika ianao raha azonao hoe ahoana no ahafahan'ny CFD miasa ary mety ho azonao atao ny manakiana ny volanao. Tsindrio azafady Eto hamaky tanteraka ny fisoratana.